Izintela ezikhokhwayo zase-U.S, zikhiya izingxabano zobunikazi - Isazi seZD Floor
Ikhaya > Izintela ezikhokhwayo zase-U.S, zikhiya izingxabano zobunikazi
Hlela: UDenny　2019-12-30　Iselula
Muva nje, i-United States idedele uhlu lwesithathu lwezinhlawulo zokukhokhiswa kwemali ekhokhwayo, yamemezela ukukhishwa kwemali ekhokhwayo emikhiqizweni ephansi kakhulu.I-Patent giants Unilin, I4F, neVälinge sebefinyelele kwisivumelwano ecaleni lokuvala amalungelo obunikazi.
Lemicimbi emibili emikhulu iqede ukungaqiniseki kwenqubomgomo nokungaqiniseki kwezobuchwepheshe okubhekiswe ekuthuthukisweni komgangatho we-elastic esikhathini eside esizayo. Kulindelwe ukuthi amafektri aseChina aphansi kakhulu azogcina umkhiqizo wokukhula nowokuthengisa eminyakeni emibili kuya kwemithathu ezayo!
I. Ukukhishwa kwemali ekhokhwayo yempahla ekhokhelwa intela kuthanda ukuthunyelwa e-U.S.
NgoNovemba 7, 2019, iHhovisi loMmeli Wezentengiselwano wase-United States lakhipha uhlu lwezinhlu ezintsha zokuxolelwa, ememezela ukukhululwa kweminye imikhiqizo ebilokhu ikhokhelwa enye imali ekhokhwayo kusukela ngoSepthemba 2018 (okuwukuthi, "uhlu lwama-dollar ayizigidi ezingama-US $ 200"). Ukusuka ngoSepthemba 24 kuya ku-Agasti 7, 2020, imikhiqizo ekhishwe ibandakanya ukufakwa kwe-PVC elastic floor, okuhambelana ne-US Customs Import Code 3911.10.1,000, ukumboza iningi ngobuningi be flooring.
Yize isikhathi sokuxoshwa siphelelwa isikhathi ngo-Agasti 7, 2020, ochwepheshe beNhlangano banethemba lokuthi ukuxolelwa kuzoqhubeka. Ngemuva kokuphela kwalokhu kuxolelwa, imikhiqizo ephansi eshintshashintshayo izophinda iphinde ihlawulwe.
Ngoba lapho i-US Trade Representative Office ifaka izintela zezimpahla zaseChina, ifake ohlwini izimo lapho izinkampani zase-US zifaka isicelo sokuxolelwa kwezintela. Izimo zokuxolelwa zifaka izici ezintathu, okungukuthi, "ngabe umkhiqizo ungomunye umthombo wokuhlinzekwa ngaphandle kweChina", "noma ngabe intela ingazilimaza kakhulu izintshisekelo zenkampani yase-U.S. Noma i-U.S ifaka isicelo", "ngabe umkhiqizo uhambisana nohlelo lwezezimboni lwaseChina Kunokubaluleka kwamasu okubalulekile. "
Ngokunikezwe ukuthi ngaphezu kwe-90% yamabhilidi e-elastic e-United States angeniswa evela eChina, ihlobene kakhulu nokuphila kwansuku zonke kwabathengi baseMelika kanye nezintshisakalo zabasabalalisi nabathengisi baseMelika, futhi lo mbuso ngeke uvele ezinyangeni ezimbalwa nje Izinguquko ezinkulu.
Ngakho-ke, kunengqondo ukukholelwa ukuthi ngemuva kokuphela kwalesi sikhathi sokuxolelwa, ukubeka phansi okuphezulu kuzoqhubeka nokuthola ukukhululwa kwentela.
Izintela ezikhokhwayo zase-U.S, zikhiya izingxabano zobunikazi Okuqukethwe okuhlobene